26 / 05 / 2021 01 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 635 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ကြောင်နက်, ဓါးရွက်, ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း, Daredevil, Firestar, Lego, Lego မှ marvel, Lego Ninjago, Lego Spider-Man, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego Technic, LEGO.com, Marvel, နက်နဲသောအရာ, Ninjago, စျေးဝယ်, ပင့်ကူဟမ်း, Spider-Man, နည်းပညာ, အပြစ်ပေးသူ, အဆိပ်
VIP ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်သည်ယခုအချိန်တွင်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေသည် Lego Group ၏အကြီးမားဆုံး Marvel ရက်စွဲသတ်မှတ်ထား 76178 နေ့စဉ် Bugle.
အဆိုပါမျှော်စင် Spider-Man- အမြင့်ဆုံး ၈၂ စင်တီမီတာအထိရှိသောအဆောက်အအုံတစ်ခုထဲသို့ပေါင်းစပ်ထားသော ၃,၇၇၂ အပိုင်းအစဖြင့်ခေတ်မီမော်ဒယ်နာရီများဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုအကြီးဆုံးဖြစ်စေတယ် Marvel မက်ထရစ်မျိုးစုံဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံးပုံသဏ္heavyာန် - လေးလံသည်။ ပလပ်စတစ်အလုံး ၂၅ လုံးပါ ၀ င်သည်။
၎င်းတို့အနက် Daredevil, Punisher, Blade, Black Cat နှင့် Firestar တို့၏ပထမဆုံးသောအသေးစားဓာတ်ပုံများ၊ Spider-ManSpider-Ham၊ Venom၊ Carnage, Mysterio နှင့်…ကောင်းစွာစာရင်းသည်ဆက်ရှိနေသည်။ သင်တို့သည်ဤ 18 ပုံသဏ္ofာန်အဘို့အသင့်လျော်သော, ရောနှောခြင်း၌အချို့သောအစစ်အမှန်ညစ်ညမ်းသောတွေ့လိမ့်မည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ထိုလူသိနည်းလောက်သောဇာတ်ကောင်အချို့ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်။
In-store မှာမိုးမျှော်တိုက်၏စတော့ရှယ်ယာပုံဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် တော်တော်လေးကန့်သတ်တက်ထိမှန်ဖို့ဒါအကောင်းဆုံး LEGO.com သင်တစ် ဦး မိတ္တူအာမခံချင်တယ်ဆိုရင်။ မင်း p ကိုလိုအပ်လိမ့်မယ်art စတာလင်ပေါင် ၂၇၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉၉.၉၉ နှင့်, ၂၉၉.၉၉ တို့ဖြင့်စူပါဟီးရိုးအားတူညီသောစျေးနှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် - လုပ်နိုင်သောပုံစံ နည်းပညာပိုင်းချိတ်ဆက်ဂရုတစိုက် - positioned ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုကျေးဇူးတင် နည်းပညာ တံသင်။
သင်သည်သင်၏မိတ္တူရောက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်, ငါတို့လွှမ်းခြုံအားလုံးစစ်ဆေးပါ 76178 နေ့စဉ် Bugle:
ပုံများတွင်: Lego Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle
Marvel 76178 Daily Bugle သို့ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် LEGO သို့တောင်းဆိုခဲ့သည်
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics မှာယူသည် 76178 နေ့စဉ် Bugle - နှင့်အခြားမည်သည့် Lego Marvel အစုံ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်း တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Marvel 76178 Daily Bugle ကို VIP များအတွက်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်
တစ် ဦး LEGO ဖြစ်ပါတယ် Star Wars လာမည့်နှစ်တွင်စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စီးရီး? →